ikhaya » Okufumaneka » Umyalelo omtsha: Utshintsho kunye neengxaki kwiMveliso entsha
Umyalelo omtsha: Utshintsho kunye neengxaki kwiMveliso entsha
NguT. Alex Blum, uMsunguli, i-Blum Consulting Partners /los Angeles
Ngeendlela ezininzi, i-world-multi-platform platform yokunikezelwa kwezinto ezinokubhengeza inokuziva ngathi inkululeko yonke, kodwa kuzo zonke idideko, zikhona ezimbini ezifunwayo ezifunyenweyo zendalo yonke yesiqhelo esishayela imicimbi yokuvelisa ii-arhente zithatha imihla ngemihla. Okokuqala kuyimfuneko yokuvelisa umthamo omkhulu womxholo kwizinga elibanzi lweendaba - kwaye okwesibini kukukwazi ukuhambisa umxholo kumanqanaba ahlukeneyo emgangathweni kunye neendleko zamanani asetyenzisiweyo okanye iintlobo zeendaba.
Ezi zigaba zibini zonikezelo ngamnye zibonisa imingeni eyahlukileyo kakhulu, kodwa ilingela ukucinga ukuba isisombululo esisisisigxina sinokuhlangabezana neemfuno zabo. Oku kungenxa yokuba "umxholo wokuvelisa" udla ukusetyenziswa njengesiqulatho sevulephu esinika ingqalelo yonke imveliso ye-asethi - ukusuka "kwindlela" ukuya kwiivenkile zentengiso yelizwe. Nangona kunjalo, inkcazo evulelekileyo yenkcazo ebonisa ukuba kukho uhlobo oluthile lwe "ubukhulu obufanayo buhambisana nayo yonke" impendulo kuyo yonke imicimbi yokuvelisa ingxaki ngendalo.
Iiyunithi zokuvelisa ngaphakathi kwendlu kufuneka zihlangabezane nomngeni wokuvelisa zombini ubuninzi beendleko eziphantsi, izinto ezilahlayo kwiimidiya zentlalo kunye nemilayezo yeenkampani, kunye ne-bajeti enkulu, ukuthengiswa kweentengiso kunye nokuthengwa kwemithombo yeendaba, nto leyo idinga ukuqonda okunzulu kwazo zonke iintlobo zeempahla kunye nendlela yokuphumeza iinkqubo zemveliso ezihlangabezana neemfuno ezithile zeeprojekthi. Esinye sezizathu esiye sazisa ama-Blum Consulting Partners ngokukhethekileyo ukuba asebenze kunye namagranti kunye nee-arhente ezijongene nendlela yokuchaza umxube ohlukeneyo wokunikezelwa kunye nokubeka inkqubo efanelekileyo yokuvelisa iinkqubo ezihambelana neemfuno zabo.
Ii-Agencies kunye neempawu zilawula ukutshintshwa kwixesha elichazwe ngamashishini athengisa amaphepha kunye nokupapashwa kweentengiso ezifikelela kwinani elikhulu kakhulu labathengi, ukuvelisa uluhlu olubanzi lweenqwelwana zamanqwanqwa abathengi abanokufikelela kuzo kwiindawo ezahlukeneyo zokuthintela kulo lonke usuku lwabo.
Enye yeendlela esixhasa ngayo iinkampani njengoko ziqhuba umboniso wazo wokudala zibonisa iindlela zokuvelisa iintlobo ezahlukeneyo zeefa kunye nokudibanisa uluhlu lweenkqubo ukuba lusebenze ngokusebenza kwemveliso yemihla ngemihla.
Ngokomlando, iimveliso azizange zijongane nale ngxaki. Bakwazi ukunxibelelana neemfuno zabo zokuthengisa kumashishini abo kwaye bawashiye kubo bahlawule iimpahla zokugqibela. Amaziko agcina inethiwekhi ebanzi yobudlelwane kunye nezixhobo zokudala ababexhomekeke kwixesha elifanelekileyo, ukusetyenziswa kweendawo eziphezulu kunye neentengiso.
Nangona kunjalo, ngenxa yokuba umyalezo wesigxina unokungeniswa ngokuhambelana neeninzi zezifomathi-ezivela kwizentlalo, ezihambayo, ii-webisode, iividiyo ze-Facebook eziphilayo, kunye nomxholo we-Snapchat, kwiindawo ezinkulu zokuthengisa ithikithi kunye neendleko ezithengiweyo zezinto eziphathekayo. ukufikelela kufakwe enkulu kakhulu kwaye ilawulwa kangako.
Ngethuba elifanayo, ukuqhubela phambili kwezobuchwepheshe bezedijithali - kunye nokunciphisa okuqhelekileyo kumanqaku exabiso lomveliso kunye ne-post-production hardware kunye nesofthiwe. Iindleko ezantsi zezinto zokusebenza zenze iinkonzo ngezindlu zisebenzisekayo kwaye zisebenzise ezinye zombini iimpahla kunye nee-arhente ngexesha elithile, ukudibanisa, ukudibanisa, ukuthengiswa kwezinto ezininzi kuye kwaba yinto evamile.
Xa uqwalasela impembelelo yalezi zinguqu, akunzima ukuqonda ukuba kutheni kunzima ukuba ii-arhente zixhomekeke kwi-dime evela kwilizwe lokusasazwa / lokushicilela kwindawo yokuvelisa apho umxube wezinto zokudala kunye neeseti zeemfuno ezihlala zihlala khona kwiinqonga ezininzi.
Enye yeendlela esinceda ngayo abathengi bethu ukuba bajongane nale ndawo enzima kakhulu ngokuzibonakalisa "umyinge wemveliso" njengendlela yokuhlenga uhlobo lwenkqubo efunekayo ukuze anelise iimfuno zeprojekthi nganye eneendlela ezichanekileyo zokunikwa kwezinga elifanelekileyo mgangatho.
Isinyathelo sokuqala senkqubo siqala ngokuchonga umyinge kunye nokucacisa iinjongo ezipheleleyo kunye neempahla ezihambelanayo eziza kuveliswa. Xa ukulindela kokubaluleka komxholo kucacile, ke ukuqikelela indlela yokwenza umveliso nokukhetha abalingani bokungena ngaphakathi okanye kwindlu kuba lula.
Ngomlinganiselo ogqithisileyo, umgangatho womxholo unokuveliswa kwisilinganisi esivela kwizixazululo ezithengiswayo eziqhutywa yixabiso kunye nomthamo weefa ezifunekayo-ukuqhutyelwa kwekhwalithi, isisombululo esisodwa, kunye nexabiso njengento yesibini.
Ekubeni ukufumanisa ixabiso elifanelekileyo kwixabiso lihlala linjongo, indlela yokusebenza ingaba yintoni na evela kwimeko yokuncintisana yenkampani yokukhuphisana kunye neenkampani zokuvelisa eziphezulu, ukuya kwi-RFP ukulungiselela ukuzaliswa kweemidlalo zentlalo ezenzileyo.
Okubalulekileyo, injongo kukufumanisa indlela efanelekileyo yokuvelisa i-asethi nganye, ukuqonda ngokucacileyo izinga lekhwalithi eliyidingayo, kwaye ulinganise ezo ngqalelo kunye nemiba yeendleko kunye neemfuno ezifanelekileyo. Ezi ngqalelo zingabandakanya imithendeleko, umthamo womsebenzi kunye nezinye izinto ezininzi.
Ngokucacileyo, izinga lekhwalithi efunekayo kwi-Super Bowl indawo ngokubhekiselele kumacandelo amavidiyo okuqeqeshwa kwenkampani ayifani, ngoko kubalulekile ukuba kucace malunga nokuba kwinqanaba-ukusuka kwiindleko ukuya kumgangatho - umsebenzi kufuneka uwele xa ugqiba. (Jonga umdwebo we-1 ngezantsi omelela enye indlela esinxibelelana ngayo nabaxhasi bethu ukukunceda ukubeka phambili iinjongo zabo :)
Ukunyaniseka kwendawo yokukhangisa yanamhlanje kukuba uluhlu olubanzi lweentlobo eziphathekayo kunye nolululwazi lufuna amaqabane amaninzi okudala ahlukeneyo, iindlela kunye nezindlela zokuvelisa. Ukusuka kwimbono yokudala, iinkonzo ezizodwa ezibonelelwe ngemithombo eninzi zingaba yinto entle, kodwa kuthetha ukuba iiprojekthi zifuna inqanaba elincomekayo lentsebenziswano phakathi kwabo bonke abalingani bokudala.
Isisombululo sinokulula njengoko igosa elikhokelayo okanye idijithali enye inokuthwala uxanduva lokulungelelanisa amaqela amashishini kunye namaziko okuvelisa asebenzisana neprojekthi encinci yeqela elininzi okanye umkhankaso omkhulu ohlangeneyo, jikelele. Ubunzima benkqubo buhluka kwiprojekthi nganye, kodwa kwakhona, kukho imilinganiselo yendalo yonke engasetyenziswa jikelele.
Okubaluleke kakhulu, ihlale ilungile ukwenza elinye iqela lijongene nokulungelelanisa intsebenziswano phakathi kwabo bonke abalingani bokudala. Inokubambisana nabadlali-okanye ucebisi-onokuvelisa ubuchule kwiiplatifti ezininzi. Kwakudinga ukuqonda okuqingqileyo kweendlela ezinokusetyenziswa kwemveliso eyahlukeneyo, ukudala ixesha elifanelekileyo, ukuphunyezwa kweenkqubo ezihlangabezane neendleko kunye neengcinga zokudala - kunye nokukwazi ukukulindela nokuphepha iingozi ezikhoyo. Akukaze kubekho mfuneko enkulu yokulungelelaniswa kwabadlali abahlukeneyo kunye nokuqinisekisa ukuba iimfuno zeempahla ziza kuqala kwaye zijoliswe kwisicwangciso sayo sokuvelisa.
Injongo ephambili ijongene nokunikela ngokugqithiseleyo kunye nokugqwesa kweyona mveliso yelinye uhlobo lokunikezelwa - ngaphandle kokuchitha imali kunye nexesha kwiimpazamo okanye ukuvelisa umgangatho kwinqanaba eliphezulu kakhulu lomgangatho kunokuba lifuna. Ukufeza oku kunokuba nzima kunokuba kuzwakala, njengoko uwela ngaphaya kwemida ebalulekileyo kunye neendima - ukusuka ekulawuleni i-akhawunti ukuya kulawulo lweprojekthi kwimveliso - kunye nokuziphatha kwendawo kufana nehlabathi kwi-arhente njengoko kusemimandla emikhulu nakwiinkampani ezincinci.
Indlela yethu kukukhuthaza ukubambisana phakathi kwabo bonke abalingani bezobugcisa, banikeze iingcebiso ngeengcebiso, kwaye bacwangcise kwaye baphumelele isisombululo esicwangcisekileyo sexesha esingasetyenziswa kuzo zonke iiplani ngokuqhubeka phambili. Amashishini kunye nee-arhente zinokuzuza kwizakhono zethu zokuxazulula iingxaki, ingqiqo kwiingcambu zemiba ephindaphindiweyo kunye nemingeni eyenziwa yinkqubo yokuvelisa ngokukrakra namhlanje.
T. Alex Blum ngumlingani osisiseko se-Blum Consulting Partners, umcebisi wezobugcisa osebenza ngeempawu, ii-arhente kunye namaqabane abo abaqilileyo ukuba bakhuthaze intsebenziswano kwinkqubo yokuvelisa. U-Alex unembali ye-35 yeminyaka kwimveliso yentengiso njengeMnini-mveliso / uMlawuli oyiNtloko wekampani yokuvelisa i-Headquarters, kunye ne-Co-Producer kwi-Behind Enemy Lines, i-Fox 2001 kunye noMvelisi kwi-Flight of the Phoenix, i-Fox 2004. U-Alex wayengumSihlalo we-AICP we-3-time, ehloniphekileyo nge-AICP yexesha lokuPhucula iNkcazo kwaye ube ngumfundisi weendwendwe kwi-Smithsonian. Ngaphambi kokuqala ii-Blum Consulting Partners, uAlex wayeyiNtloko yeGosa loLwazi kwiZiko loPhuhliso lweeNtengiso.
Injineli yokusasaza Ukusasazwa kwezobunjineli ITeknoloji yeTV Injini yeVidiyo	2017-09-05
Previous: UmPhathi woBugcisa beZakhono
next: Iingcali zeLebhu yezoLwazi II
Hey Buddy !, Ndifumene le ngcaciso kuwe: "I-Order entsha: iinguqu kunye neengxaki kwiMveliso entsha". Nantsi ikhonkco lewebhu: http://www.broadcastbeat.com/the-new-order-changes-and-challenges-inew-content-production/. Enkosi.